Kana iwe usingakwanisi kumirira zvinhu izvi kuti uuye kumusangano weWeansApp, iwe unogona kubatana neProgram yeAssApp Beta. (Image Reuters)
WhatsApp mumwe wemapurogiramu anonyanya kutumirwa mapurogiramu mapeji maviri Android uye iOS mapuratifomu. Uye kuchengetedza nzvimbo yakakwirira iyo kambani inoramba ichisimudzira zvinyorwa nezvitsva zvitsva kuti zviri nani muhutano hwevashandi. Iyo kambani inoedzawo zvose izvi zvitsva mubhiiyo yebheta yepurogiramu isati yasvitsa chimiro kune vose vashandisi.
Nhasi takasarudza kuunganidza urongwa hwezvinhu zviri kuuya izvo zvichakurumidza kuwanika kune WhatsApp vashandisi. Zvisinei, kana iwe usingakwanisi kumirira zvinhu izvi kuti uuye pane zvevanhu veAssApp app, unogona kubatanidzwa nepurogiramu yeAssApp Beta kuti uiwane pamberi pevamwe vose.
Nhau ye Facebook Sharing
WhatsApp ichakurumidza kubvumira vashandisi kugovana maitiro avo ehuwandu zvakananga Facebook Nhau, dzakafanana nekushandiswa kwevashandi paIndaneti. Kuti zvibatsire ichi chinonzi WhatsApp iri kushandisa Facebook's data sharing API, zvinoita kuti zvive nyore kune vashandisi kuti vasapindirana neAsApp account yavo nehupenyu hwavo hwepa Facebook kutumira nyaya. Ichi chiitiko iye zvino chiri kuongororwa kunze kweIndaneti chete.
WhatsApp ikozvino inoshanda pane imwe mamiriro emhando yemhando ye app yako. Maererano nemishumo, iyi mamiriro matsva achazonzi Night Mode uye se-Android's Dark Mode ichaita musoro wepamusoro webasa rekunyama. Izvi zvichatibatsira mafoni efoni neOLED panels kuponesa pahupenyu hwebheteri uyewo zvichava nyore kune vashandisi maziso mumamiriro ezvinhu asina kunaka.
Iyo itsva QR code feature inobvumira vashandisi kuwedzera mahofisi kumafoni avo kuburikidza nekuongorora vamwe vashandisi WhatsApp QR codes. Apo ichi chinoitwa chinorarama hupenyu hwemunhu wese huchapiwa huwandu hweKRR yakasiyana nevamwe inogona kuverenga uye kuwedzera kwavari kune mazita avo. Ichi chinhu chave chave chawanikwa pane mapurogiramu akaita se WeChat.
WhatsApp's iOS version ichakurumidza kuwana yakawanda yakachena album layout. Nekuvandudzwa kunotevera, WhatsApp inotanga kubhabhatidza mapikicha akawanda muhumwe chete bubble pane WhatsApp Chats. Uyezve, purogiramu yacho icharatidza huwandu hwemifananidzo dziri mu album bubble.
Profile picture picture protection
Takaona ichi chiitiko chichienda kurarama paIndaneti, uye ichakurumidza kuwanikwa paIOS. Izvi zvichabatsira kuchengetedza vashandisi vayo mapikicha yemifananidzo kubva pakudzingwa nevamwe vashandisi. Mushure mekunge chiitiko ichi chinoshandiswa vashandisi havazokwanisi kutora zvidzidzo zvemifananidzo yevashandisi vemifananidzo. Vashandi vachiri kukwanisa kutora mifananidzo yeboka.
47 zvakavanzika WhatsApp mazano uye manomano iwe aungasaziva nezvazvo
43 zvakavanzika WhatsApp mazano uye manomano iwe aungasaziva nezvazvo
Mashandiro mashanu Ekushandisa Sei WhatsApp Ekushambadzira
5-Nhanho Nongedzo Yekutamisa WhatsApp Chats kubva ku iPhone kuenda Android Uchishandisa Chat Kutama